‘बच्चा कहिले जन्माउने’ भनेर सोध्दा स्वस्तिमा दिइन् यस्तो जिल्ल पार्ने जवाफ (भिडियोसहित)
May 13, 2020 6990
लकडा’उनका कारण कलाकारहरु अहिले फुर्सदिला भएका छन् । त्यसैले उनीहरु अहिले परिवा’रसंगै समय विता’इरहेका छन् । कहिलेकाँही फेसवुक लाइभ भिडि’योमा आएर आफ्ना अनुभव बाँड्ने’ गरेका छन् ।
लकडाउन ब्लग बनाएर आफुहरुले घरमा लकडा’उनका समयमा गरेको गतिवि’धि पनि आफ्ना फ्या”न सामु देखाएका छन् । कति कला’कारहरु फेसवुक लाइभ मार्फत आफ्ना फ्यानसंग प्रत्य’क्ष कुराकानी पनि गर्ने गर्छन ।
कलाकारहरुलाई उनीहरु'”का फ्यानले अनपेक्षित प्रश्न पनि सोध्ने गरेका छने । जसले कलाकारलाई हैरान बनाउँछ । हालै स्व”स्तिमाले पनि त्यस्तै प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ । उनलाई सामाजिक सञ्जालमा उनकै फ्यानले सोधेको प्रश्नलाई उनलाई अनौठो अनभुती गरायो ।
सामाजिक सञ्जाल’मा सबैभन्दा बढी गसिप हुने वि’षय हो कलाकारको ब्यक्तिगत जिवन । उनीहरुका ‘बारेमा विभिन्न कुराहरु अनुमानित खबर बन्ने गरेका छन् । सर्वसाधारण र फ्यानलाई कला’कारको ब्यक्तिगत जिवनको निकै चासो हुन्छ । त्यसैले कलाकारका यस्ता ‘विषय पनि गसिप बन्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालम फ्या’नले सोधेको प्रश्नको जवा’फ दिँदै नायिका स्वस्तिमाले निकै तार्कीक जवाफ दिएकी छन् । नायिका स्वस्तिमा खड्काले आ’फ्ना फ्यानको जवाफ दिने’ क्रममा उनले केही’ यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपरेको छ, जुन उनका लागि नै अनपेक्षित थियो ।एक दर्शकले उनलाई सोधे–‘के तपाईले निश्चलसँग पैसा_का लागि बिहे गर्नुभएको हो ?
किन अहिलेसम्म तपाईह’रुले बच्चाको बिषयमा नसोच्नुभएको ? यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नायिका स्वस्तिमा खड्का’ले लेखेकी छिन्–‘के पैसा कमाउन सजिलो छ र ?
हामी किन मिहिनेतका साथ काम गरिरहे’का छौ ? सजिलो जवाफ छ कि, को’हीसँग बिहे गर अनी पैसा कमाउ । बच्चा”को बिषयमा अहिले कुनै आइडिया छैन ।’यस्तै, केही मा’निसहरुले गर्ने आलोचनाको बिषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा स्वस्तिमा भन्छिन्–‘घृणा कुनै पनि मानिसको नकारात्मक भावना, डर र असुर’क्षा व्यक्त गर्ने माध्यम हो ।’ भिडियो हेर्नुहोस्….
Prevनेपालमा थप २४ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २४३ पुग्यो
Nextभोलि जेठ १ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्
गुहा’र माग्दै रबि लामिछाने’लाई भेट्न पुगे: आफ्नो कलेजो का’टेर १५ दिनको छोरा’लाई बचाउ:ने बाबु [हेर्नुहोस भिडि’योसहित]
नेपालमा आज कोरोनाको कारण थप २ जनाको मृत्यु, मृ’त्यु हुने कहाँ कहाँका ? हेर्नुहोस्…
मोबाइल खल्तीमा राख्नुहुन्छ ? बाँझोपन निम्त्याउने देखि अन्य यस्ता समस्या हुनसक्ने
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (78118)